सुजिता भण्डारीको पोष्टमार्टम रिपोर्ट : जाँच गर्दा ज.बरज.स्ती क.रणीको कुनै संकेत देखिएन…. – SUDUR MEDIA
July 7, 2021 July 7, 2021 AdminLeaveaComment on सुजिता भण्डारीको पोष्टमार्टम रिपोर्ट : जाँच गर्दा ज.बरज.स्ती क.रणीको कुनै संकेत देखिएन….
काठमाडौं, २३ असार । सुजिता भण्डारीको पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ । बेप’त्ता भएको ९ दिन पछी चितवनको जंगलमा मृ’त फेला परेकी चितवनको राप्ती नगरपालिका–३ की २३ वर्षीया सुजिता भण्डारीको काठमाडौँको महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पतालमा पोष्टमार्टम भएको हो । फरेन्सिक जाँचमा संलग्न चिकित्सकहरुका अनुसार पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट सुजिता भण्डारीको मृ’त्युको कारण स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
उनको मृत्यु चो’टपटकबाट भने नभएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । श’ब नजिकै सिसाको बोत्तलमा वि.ष भेटिए पनि वि.ष खाए नखाएको पोष्टमार्टममा देखिएको छैन । प्रहरी स्रोतका अनुसार पोष्टमार्टमको क्रममा भण्डारीको यो.नीको जाँच गर्दा ज.बरज.स्ती क.रणीको कुनै संकेत देखिएको छैन । आफन्त र स्थानीयले ज.बरज.स्ती क.रणीपछी ह’त्याको आशं’का गर्दै आएका थिए ।
पोष्टमार्टमबाट मृ’त्युको कारण खुल्न नसकेपछि भिसेरा परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ । भिसेरा परिक्षणबाट मृ’तकले जीवित रहँदा खाएको कुरा र मृ’त्यु अघि कुनै रो’ग भएको भए त्यसबारे पनि थाहा हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । भिसेरा रिपोर्ट आएपछि मात्रै भण्डारीको मृ’त्युको कारण प्रस्ट हुने चिकित्सकको भनाई छ ।
९ दिन अगाडी देखि बे’पत्ता रहेकी सुजिताको श’व सुरुमा जंगलमा च्याउ खोज्न आउने चेपाङहरुले फेला पारेपछि इलाका प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराएका थिए । असार ११ गते बिहानै घरबाट निस्किएकी सुजिताले दिउँसो दिदी कवितालाई आफू अ.पहरणमा परेकाले बचाउन आग्रह गरेको परिवारका सदस्यहरूले बताउँदै आएका छन् ।